Ugu Weyn Ee Almond
Geedka miraha waa mid yar, laakiin midho dhir ah oo yar ama dhoobo ah oo ah qaraabo ah tubta. Ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, yicibta aan aheyn kuwa aan nadiif ahayn, waa miro dhagax adag. Aasiya waxaa loo tixgeliyaa goobaha dhirta, laakiin xilliga xaadirka badi badi qaybo badan oo dunida ka mid ah, waxaa si guul leh ugu kordhay gobolada qaar ee Maraykanka, buuraha Tien Shan, Shiinaha, Yurub, Badana waxaa lagu qaybiyaa waddamada Badda iyo Koonfurta, sidoo kale , sida la ogyahay, wuxuu ku yaalaa isku xirka Aasiya iyo Yurub.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo bur ah oo bur ah oo sawir leh
Waxaa jira noocyo kala duwan oo suxuunta ah oo u baahan shamiin aan aheyn sida qayb ka mid ah. Alaabta noocan oo kale ah ayaa laga iibiyaa meel walba, waana qaali. Si kastaba ha ahaatee, burka laga helo maadada almond waxay si fiican u xiri kartaa xaflad kasta oo jikadeeda ah. Dabcan, xitaa kiiskan, qayb ka mid ah ma aha raaxo raqiis ah, laakiin tan iyo markii loo isticmaalo in lagu dhejiyo macalimiin culus oo culus oo loogu talagalay in lagu qurxiyo miiska xaflada, marmarka qaarkood waad wadi kartaa.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Almond 2019